Ulawulo lolwazi, umhlaba utshintshile- Geofumadas
Ulawulo lolwazi, ihlabathi litshintshile
NgoJanuwari, 2012 Ukufundisa i-CAD / GIS, Internet kunye neBlogs, egeomates My
Siphila kwixesha apho izakhiwo zolawulo lwezinto zakudala kufuneka zilungiswe. Kukho iindawo apho sisafuna ukugcina iindlela ngohlobo lookhokho bethu, xa ulwazi lwalugxilwe kwindawo ephakamileyo kwaye lwathengiswa kubemi phantsi kweemfundiso zokukhohlisa. Kwimeko enje ngookhokho bam bakaMayan, ngayo yonke into kunye nenkqubela phambili yabo ebabeke efashini, bakha babugquma ubuqaqawuli bukaKumkani wangaphambili ngokwakha isixeko ngaphezulu, sifana ncam nale nto yenziwa ngoorhulumente -ngaphandle kokuthandabuza, kodwa ungavumeli imspy zenziwe nokuba-. 🙂
Kulungile ukubona iinzame zoogxa babo kwiindawo ezahlukeneyo zomxholo we-Hispanic, abaqala iibhloko zabo ukubuyisela olunye ulwazi kunye namava afunyenweyo; Siyabakhuthaza ukuba bangahoyi amanyathelo abo, nokuba kukanye ngenyanga, kufuneka sinyanzelise inqaku elitsha. Le yindlela uGeofumadas awazalwa ngayo kwi-2007, kwakudala emva kokuba iisayithi ezinkulu ezinje ngeCartesia.org zabakhona ukusukela nge2001 kunye GabrielOrtiz.com Ukufika kwi2003. Akukho mntu unokuyiphika into yokuba kwezi ndawo wafunda into entsha, ukuba wandise ulwazi, ukuba wabelane neyakhe, ukuba wazi unxibelelwano ezibalulekileyo kwaye ukhule kwiindlela zobungcali; Ndiyabulela kuba ukuza kuthi ga ngoku ezi ndawo ziye zagcina ukukhuthaza ukuba semthethweni kokusetyenziswa kwelayisensi kunye nokuhlonipha imibutho yobungcali.
Ngenye imini sahleka kwi-cafe ebonakalayo kunye noGabriel kunye noTomás, simangalisiwe kukuba xa zizonke iisayithi ezintathu (uCartesia, uGabrielOrtiz kunye neGeofumadas) siqokelela ngaphezulu kokutyelelwa ngenyanga kwe-230,000, ngaphezulu kwe-90% ukusuka kwindawo yokuthetha yeSpanish. Umsebenzi onomdla kwimeko yethu ngokuqinisekileyo ezinye iimeko ezingathanda ukuba nazo, kuba ukubeka izixhobo ezivumela ukusasazwa kolwazi bekusoloko kusenzeka kwezi ndawo, kugcinwa imbeko yokuhambelana.
Sinethemba lokuba ukuvela kweemodeli zoluntu olufundayo, njengoko zisenzeka kunye ne-Intanethi, ukufumana amanqaku okulingana phakathi kwenkuthazo yokudala umxholo, ukukhuthaza iilayisensi zokusasimahla zasimahla kunye nenkonzo yeenkonzo zabucala. Asithandabuzi ukuba zonke ziyafuneka, kodwa asikaze khe sibe nelizwe elihlangeneyo nelinxibeleleneyo njengoko linjalo ngoku, ke ukungxamiseka kokuphononongwa komthetho wamanye amazwe kulawulo lolwazi ngumceli mngeni onamandla; kwaye kuyabonakala ukuba ichasene ne ukuvalwa kwe-megaup I-Hispanics iya kuba nento eninzi yokuthetha.
Ukuba akukho lula ukuthi, kulula ukucacisa ukungazi kwakhe kuBon Jovi xa wathi uSteve Jobs watshabalalisa umzi-mveliso womculo ngokuqanjwa kwe-iPod; kuya kufuneka ukhumbule nje oko kubiza kwilizwe laseSpanish ukuthenga loo albhamu imangalisayo "New Jersey" ngo-1988, kwaye ukufikelela kwakho ngoku kufuneka ukwazi ukuthenga kuphela iingoma ozithandayo kwiAmazon. Kwimeko apho akukho nto ingako ekuzonwabiseni, ekungekho mntu uya kufa ngayo, nangona kunjalo, ukuthintelwa kweshishini ekubeni likwazi ukufikelela kuluntu lomthengi ngemveliso zalo ezinento yokwenza nexabiso lenkcubeko okanye ulwazi lophuhliso ... iyahamba ixesha elide, ibe isangqa esikhohlakeleyo phakathi kwamaxabiso aphezulu, ubuqhetseba nokungalingani ekuthengeni amandla.
Iindlela ezintsha zedemokhrasi yolwazi ziyafuneka, kunye nezinto ezizezinye ezinokusetyenziswa ukuze umba wentengiso uhlale uzinzile kodwa uqonde iimeko zentlalo nezoqoqosho. Eso sizathu senze ukuba intshukumo evulekileyo yoMthombo kunye neendawo ezihlanganyelweyo zokwabelana zichazwe gwenxa ngumthetho wobunikazi okanye zisetyenziswe gwenxa ngabasebenzisi abangafuni ukuthenga incwadi ebiza iUS $ 20 okanye i-antivirus exabisa i-US29.
Njengomzekelo wentando yesininzi yolwazi, ndifuna ukushiya eli tyala:
Umqulu wokuSebenza kweSitishi esipheleleyo
Ngamaxesha athile adlulileyo (kwi2008), ngomnye woochwephesha bokusebenza kwethu saqulunqa inguqulelo yokuqala yolu xwebhu, ngokujonga kwicadastre, sipapasha apha ngokukhetha ukukhutshelwa ngeScriptd xa inkonzo yayisimahla.
Apho ifundwe amaxesha e-55,400, kodwa isimanga esikhulu kum ngoku kukufumana inguqulelo entsha esebenzayo ngenxa yomzamo weLeopoldo Hernández kwaye:
UTania Cilin Gordillo
UCarlos Eduardo Vargas
UJuan Antonio Chompa
Umxholo wandisiwe kakhulu, kubandakanya nemifanekiso ebalulekileyo yentsimi, kunye neenkcazo zamanyathelo aneenkcukacha ezigqwesa ubukhulu, kumaphepha e-35 ngoku luxwebhu olungaphezulu kwe-70.
Utshintsho lubandakanye inkcazo ngakumbi kwinqanaba ngalinye, kubandakanya ukukhuphela idatha kusetyenziswa isoftware yeProlink kunye nokongeza ukwakhiwa kwitshathi yezifundo usebenzisa i-CivilCAD.
Umzekelo olungileyo wokuba kuthetha ntoni igalelo lilonke labahlali. Uxwebhu lusenokuba luphelile ukulibala i-hard drive yokusebenzisa ubuqu; ngokunjalo nala makhwenkwe, sele eyiphucule kwaye ayigcina iyimfihlo kwiinkonzo zobuchule abazinikezelayo.
Kodwa ukuyibuyisela eluntwini kunye nayo kuya kubonisa inqanaba lokuvuthwa elikufanele ukuhlangulwa.
Ukuya kuthi ga apho ii-Hispanics zinokuvuleleka kokusebenzisana, siya kunceda ukukhulula ulwazi kwaye siza kuvelisa uphuhliso kwimeko yethu ... ukuba iyifuna kakhulu xa ihlasela uqoqosho lwehlabathi. Nangona unyanisekile, ayicacanga indlela yokuthatha isikhokelo sokuphembelela umthetho wamazwe aphesheya phantsi kwezizathu eziqinisekileyo.
Incwadana yemigaqo inokubonwa ngaphakathi esi sixhobo
Kukho imixholo engaphezulu phaya, ndicebisa ukuba ujonge ezi ezinye zimbini:
Inyathelo ngenyathelo ukuyalelwa kunye nesitishi seLeica TS Flex-Line
Ukufumana amanqaku kunye ne-Topcon Series GTS iyonke iSitishi
Post edlulileyo«Edlulileyo Yakha i-app yethu yeselula
Post Next Ngenisa umfanekiso we-Google Earth kwisakhiwo se-ecwOkulandelayo "
Impendulo ibe nye kulawulo lolwazi, ilizwe litshintshile
Umrhumo omuhle kakhulu, obonisa ngokucacileyo, uthatha inyathelo ngenyathelo. Enkosi